औंला पट्काउने बानी छ? तुरुन्तै छोडिदिनुस् यो बानी, हुनसक्छ यस्तो हानी - dautarimedia.com
औंला पट्काउने बानी छ? तुरुन्तै छोडिदिनुस् यो बानी, हुनसक्छ यस्तो हानी
डक्टरका अनुसार, हात र औंलाहरू पट्काउँदा हाम्रो हड्डीमा नराम्रो असर पर्छ। यसका साथै दैनिक काम गर्ने क्षमतामा पनि कमी आउँछ। हाम्रो शरीरमा जोर्नीहरू हुन्छन् र ती जोर्नीहरूमा एउटा खास किसिमको तरल पदार्थ पाइन्छ। यो तरल पदार्थले हाम्रो शरीरका हड्डीहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ। synovial fluid नामक तरलले हाम्रो शरीरमा ग्रीसको काम गर्दछ। यसले हड्डीहरूलाई एक आपसमा रगडिनबाट पनि जोगाउँछ। यस तरल पदार्थमा निहित ग्यासबाट नयाँ ठाउँमा कार्बनडाइअक्साइड बन्छ र यसले फोकाहरू उमार्छ। जब हामीले औंला पट्काउँछौँ ती फोकाहरू फुट्छन् जसका कारण हाम्रो स्वास्थमा नराम्रो असर पर्दछ।
अधिकारीहरूका अनुसार, औंला पट्काउँदा गाँठाको समस्या हुन सक्छ। एउटा रिपोर्टले बताए अनुसार, हड्डीहरू आपसमा लिगामेंटले जोडिएका हुन्छन्। बारम्बार हामीले औंला पट्काएमा यसबाट आउने sunovial fluid नामक तरल कम हुन थाल्छ। यस्तो लगातार गरेमा हामीले जिन्दगीभर गाँठाको समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
Previous: हिन्दू धर्मग्रन्थमा मानव जीवनलाई सहज बनाउन तथा नित्य कर्मका विषयमा जानकारी दिइएको पाइन्छ !
Next: २६ करोड रुपैयाँको औषधि असफल, उपचारपछि पनि ११ महिनाकी बालिकाको मृ’त्यु ।